Araka Ny Fanadihadiana, Solombavambahoaka Rosiana Iray Amin’ny Sivy No Hosoka Ny Maripahaizany · Global Voices teny Malagasy
Araka Ny Fanadihadiana, Solombavambahoaka Rosiana Iray Amin'ny Sivy No Hosoka Ny Maripahaizany
Voadika ny 14 Febroary 2016 13:18 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Magyar, Italiano, Español, English
Misy amin'ireo mpanao lalàna no tsy nahatsapa ny ilàna ny filazàna ny faripahaizany, nindrana ny pejin'ny karokasan'ny hafa. Sary nafangaron'i Tetyana Lokot.
Hadihadiana ireo mpanao lalàna federaly any Rosia— ny maripahaizan'izy ireo raha ny marimarina kokoa. Raha toa ka mandainga amin'ny fianarany ireo MP na solombavam-bahoaka Duma-mpanjakana, iza no mahalala izay mety mbola lainga hataony ?
Tamin'ny 13 Janoary, navoakan'ny tetikasa Dissernet ny vokatry ny fanadihadiana nataony nandritra ny telo taona momba ny fisolokiana karokasa ahazoana maripahaizana ‘doctorat’-n'ireo mpikambana ao amin'ny Duma-mpanjakana Rosiana. Hitan'ny Dissernet fa ny 52 amin'ireo 450 mpanao lalàna no mety ho voasoratra ho “mpisoloky sy mpandainga” araka izay voalaza ao amin'ny haban-tranonkalan'ilay tetikasa — na ireo MPs izay ” diso safidy na nitanisa” ireo torohay avy tamin'ireo loharano hafa tamin'ny fikarohana ara-tsiansa nataon-dry zareo, araka ny ilazan'ireo mpisolovava azy. Ny dikan'izany dia mpanao politika iray amin'ny sivy ao amin'ny solombavambahoaka no ahiana na manana maripahaizana hosoka.
Tsy atao mahagaga raha ireo vondronà mpanao politika lehibe indrindra avy amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana “Rosia Miray” no manana mari-pahaizana sandoka na karokasa hosoka (35). Sivy no avy amin'ny Antoko Kaominista Rosiana, ny dimy antoko liberaly-Demokraty, ary avy amin'ny “Rosia Marina” ny mpangalatra telo hafa.
Ahitàna sary miloko manavaka ny fanànana maripahaizana sy mampiseho ny seza rehetra itoeran'ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko politika samy hafa ao amin'ny Duma-mpanjakana ny kisary torohay niarahan'ny gazety Novaya Gazeta sy ny Dissernet nanao ,
Kisary torohay nataon'i Alexey Komarov, “Novaya Gazeta.” Tsindrio raha te-hijery ny dikany amin'ny teny Rosiana.
Na dia mbola tsy manana ny maripahaizana any amin'ny ambaratonga ambony na ‘doctorat’ aza ny ankamaroan'ny MPs Rosiana ( seza miloko fotsy), maromaro no milaza ny iray na izy roa ao amin'ny CV-ny. Marihan'ny Dissernet fa amin'ireo milaza fa manana maripahaizana, olona 50 ( miloko volomparasy) no tsy natao fanadihadiana satria efa vita ela talohan'ny nanaovany politika ny bokiny.
Tsy nahitana hosoka na fanitsakitsahana ny fizakàmanana ny lahatsoratry ny bokin'ireo 42 mpanao lalàna nohadihadiana (miloko maitso).
Avahana amin'ny loko mena ireo 52 izay nahitana hosoka na tsy nankatoavin'ny komitim-panjakana ny karokasany. Ao amin'io vondrona io ny filohan'ny Duma, Sergey Naryshkin ( an'ny “Rosia Miray”) izay samy nahitana rakitra halatra avokoa ny boky nahazoana ny maripahaizana avy amin'ny ambaratonga ambony sy ny ‘doctorat’.
Asehon'ilay kisary torohay fa misy solombavambahoaka sasany ao amin'ny Duma no manana ilay antsoina hoe “karokasa matoatoa” : voalaza marina ao amin'ny haban-tranonkalan'ny Duma ny maripahaizana ananany fa tsy hita na aiza na aiza ny boky— eny fa na dia ny lohateniny aza. Voamarika amin'ny loko volombatolalaka miaraka amin'ny sarinà matoatoa kely ny sezan'ireny olon'ny Duma ireny. Mbola misy boky vitsivitsy hafa atao fanadihadiana.
Ny bokin'ny lefitry ny “Rosia Miray” Igor Igoshin no nahitana fisandohana tena niharihary. Tamin'ny 2004, nindraminy ambongadiny ny karokasan'olona iray voasoratra tamin'ny 2002 ary nosoloiny fotsiny hoe “sokolà” ny teny hoe “hena omby”. Ankoatr'ilay fanovàna dia tsy nokitihin'i Igoshin ny lahatsoratra tamin'ireo pejy 177.
Ohatra ny hoe io fomba ” fanoloana ” io no làlana mora indrindra hividianana maripahaizana tsy ilàna akory ny fividianana io fanohanana fikarohana io, amin'ny fanaovana tsolotra amin'ny mpitsara ilay karokasa. Amin'ny tranganà fisandohana ambongadiny nohadihadian'ny Dissernet dia soloana hoe “Kaokazy Avaratra” ny “Avaratra-Andrefana”, “vahoaka ” no nasolo ny “voalavo” ary “vehivavy no solon'ny ” vahoaka”.
Ny tombatombana mahazatra manokana ataon'ireo mpikatroka mafana fo ao amin'ny Dissernet dia tahaka ny fàfana iray miloko isaky ny pejy : ny loko betsaka kokoa – betsaka kokoa ny loharanon-dahatsoratra nadika na nampiasaina tsy nahazoana alàlana. Nampiasàna rindrambaiko manokana namboarin'ireo manampahaizan'ny Dissernet ny nanaovana ilay fanadihadiana, tahaka izany koa ny fandinihana ireo lahatsoratra amin'ny famadihana amin'ny tànana ny pejy tsirairay.
Fàfana isaky ny pejy maneho ny loharano rehetra nampiasaina tsy nisy alàlana tao anatin'ny karokasan'ny mpilatsaka ho fidiana ho filohan'ny Duma, Sergey Naryshkin. Sary avy amin'ny Dissernet.
Tamin'ny 2013 no fotoana nanombohan'ilay hetsika, rehefa injay ilay mpahay siansa Andrei Rostovtsev, Andrei Zayakin,Mikhail Gelfand, Kirill Mikhailov, ary ny mpanao gazety Sergey Parkhomenko ny fanatanterahana ny tetikasa. Telo taona aty aoriana, lasa tambajotra mivelatr'ireo mpikambana mafana fo, mpikaroka, ary ireo mpanao gazety an-tsitrapo ny Dissernet. Ny fanangonam-bola avy amin'ny olona no fanohanana ara-bolan'ny fikambanana.
Ny zava-dehibe, tsy nijanona fotsiny tamin'ny famoahana ilay halatra tao amin'ny tranonkalany sy ireo haino aman-jery sosialy ireo mpikatroka ao amin'ny Dissernet, fa miantso ny Kaomisiona Faratampon'ny Fanjakana mpanara-maso ny fanomezana maripahaizana sy ireo fitsaràna isankarazany mba hisintona ireo maripahaizana halatr'ireo mpiasam-panjakana sy ireo manampahefana.
Mihodina miadana sy mihisatra ny kodiaran'ny rafi-pitsarana, fa ahodinay – dieny mbola tsy tara, afoizo ny maripahaizanareo raha toa ka hita ao amin'ny tranonkalan'ny Dissernet ianareo. Andrei Zayakin, fizisiana mpanao teoria, mpiara-mamorona ny Dissernet, tao aminà resadresaka tao amin'ny tranonkala Bumaga.
Tany aloha, efa nanatsinkafona ny hosoka sy halatra karokasa nataon'ny governoran'ny Saint Petersburg Georgy Poltavchenko, ny mpanelanelana amin'ny zon'ny ankizy Pavel Astakhov, ny Minisitry ny Kolontsaina Vladimir Medinskiy, ny Minisitry ny Fitaterana Maxim Sokolov, ary ireo olona maro hafa manan-kaja ny Dissernet. Na dia efa naely tamin'ireo haino aman-jery aza, dia tsy nisy vokany misongadinaho an'ireo manampahefana ambony ilay filazana.
Etsy ankilan'izany, tamin'ny volana Novambra 2015, noho ny antso nataon'i Zayakin sy ny Dissernet, dia nosintonin'ny fitsarana ny ‘doctorat’-n'ny solombavambahoaka avy amin'ny “Rosia Miray”, Rishat Abubakirov. Mampihomehy, fa io mpanao lalàna io no “nanomboka” ny vondron'ny hetsika Dissernet voalohany : tezitra tamin'ny fandaniana ny lalàna Magnitsky tamin'ny 2013 i Zayakin, dia nanapaka hevitra ny hikaroka ny fahamarinan'ny maripahaizan'ireo solombavambahoaka— ary i Abubakirov no voalohany amin'ny lisitra Alfabetika.
Nahangona angon-drakitranà bokinà karokasa hosoka maro be, 5.000 ny Dissernet ary tsy mihevitra ny hijanona. Vao mainka aza ireo mpikatroka nanomboka tetikasa mifanindran-dàlana amin'izany, antsoina hoe RosVuz ( midika hoe ” Oniversite Rosiana”), izay mifantoka amin'ny fanadihadiana ireo talen-tsakoly sy Filohanà Oniversite izay manana ‘doctorat’. Noho ny fikarohana lalina sy amim-pahamalinana, dia mamelona indray ny politika sy ny oniversiten'i Rosia eny amin'ny làlana alehany ireo mpikatroka, amin'ny ezaka famahàna ny rojon'ny karokasa hosoka ( fantatra amin'ny hoe varomaizin'ny “karokasa amidy”) .